Best jiga loo dhan yahay In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Best jiga loo dhan yahay In Europe
Qorshaynta fasax ah Yurub mararka qaarkood waxay qaadan kartaa halka a. Waayo, socotada la dhaafin, waxa la joogaa wakhtigii maalgashi weyn cilmi ee logistics safarka iyo soo qaado meel ay joogaan. Waa in aad u tagto dhan yahay ama ma? Sidee baad u socotaa si aad u hesho waxaa, by tareen ama diyaarad? Waxaa runtii muhiim ah in miisaankiisu yahay oo dhan fursadaha suurto gal ka hor inta aanad samayn kartaa doorasho sax ah. Haddii aad doorato in ay sii joogaan dhan yahay noqosho, badan oo waaweyn ah meelaha Yurub kugu daboolay. Haddii aad safar marayo Europe, aad awoodid raaxaysan waayo-aragnimo ah negaado ee jiga fiican loo dhan yahay oo ay jiraan helitaanka si raaxo leh tareen. Halkan liiska ka mid ah jiga fiican loo dhan yahay our in Europe aadan ka maqnaan karin:
Waxaa loo arkaa mid ka mid ah jiga ugu quruxda badan ma aha oo kaliya in Puglia laakiin dhan of Italy iyo sidoo kale Europe. Borgo Egnazia tiriyaa mid ka mid ah jiga fiican loo dhan yahay ee Europe. Borgo Egnazia aad jiidashada doonista la dhaqanka ah style naqshadda aad ka ogaan doonto guud ahaan Puglia, iyo sidoo kale qolalka ay si qurux badan qurxiyey, barkadaha, Dabcan golf iyo xataa kooxaha hawlqabadka kids iyo dhalinyarada. Hel si Bari ama Brindisi tareen oo ka dibna u safri Savelletri di Fasano, qaadashada wadada muuqaal dabiici ah si aad u aragto oo dhan quruxda Puglia.
Naples si Tareenadu Brindisi
Naples ilaa tikidhada Tareenka Bari
Bari si ay Tareenadu Fasano
Naples si Tareenadu Fasano
Italy ayaa meelo badan oo qurux badan si ay u booqdaan, laakiin xeebaha Amalfi ugu cadcad ka mid ah Talyaaniga naftooda. Oo mid ka mid ah jiga fiican loo dhan yahay ee Europe waa xaq waxaa. San Pietro, iyadoo ay 57 qolalka iyo soo jiidasho xeebta-dhinaca makhaayad aad ku farxi doonaa sida ugu badan ee quruxdiisa ee gobolka. Waxaad ballansan kartaa a raacid tareen degdeg yar si aad u hesho in ay Amalfi, ka Naples ama Salerno - oo wuxuu ku raaxaysan views ee jidka.
Milan illaa tikidhada Salerno Train
Florence ilaa Salerno Tareenka tikidhada
Tikidhada Tareenka Bari ee Salerno Tareenka
Rome ilaa tikidhada tareenka Salerno
Best jiga loo dhan yahay ee Europe gacaliye – Club Med Opio Provence, France
Haddii aad tahay booqashada France oo raadinaya ah waayo-aragnimo dhan yahay weyn, eegi jirin dheeraad ah ka badan Provence iyo Club Med Opio miciinka. beerihiinna saytuunka ah, iyo beero lavender waxaa ay noqon doontaa sugitaanka si aad u sahamiyaan iyaga, garab qurux Côte d'Casuur. Club Med Opio Provence bixisaa cuntada la yaab leh iyadoo gobolka gaarka ah cunnada, qolalka weyn, oo barwaaqadii oo ka mid ah hawlaha aad ama carruurta - aad xitaa qaadan kartaa casharada archery! Waxaad ka heli kartaa meel kasta oo gobolka this by isticmaalaya Ter Provence-Alpes-Côte d'Casuur (ter PACA) network rail.
Dijon ilaa tikidhada tareenka Provence
Paris illaa tikidhada tareenka ee Provence
Marseilles ilaa tikidhada tareenka ee Provence
Lyon ilaa tikidhada tareenka ee Provence
Haddii aad doorbidayso muuqaal buurta halkii daadsan xeebaha, mid ka mid ah jiga fiican loo dhan yahay ee Europe si aad u soo booqato laga yaabaa in Austria ee Tyrolean Alps. Hotel Tannenhof views buurta heer faanaa, waana a gurasho ski weyn kuwa ka jecel jawi wax yar ka gaar ah. Waxaad ka Innsbruck gaari karo si fudud Ischgl, Zurich ama Munich - tareenka aad qaadan doonaa Landeck, ka dib markii taas loo dalxiis tago waa drive gaaban iska.
Vienna si ay Tareenadu Landeck Ischgl
Munich in ay Tareenadu Landeck Ischgl
Salzburg in Tareenadu Landeck Ischgl
Zurich si Tareenadu Landeck Ischgl
COR-Resort ee Gobolka quruxda badan ee Bavaria ka mid ah jiga fiican loo dhan yahay ee Europe, gaar ahaan marka ay timaado bixinta adeegyada sida ski-wiishashka iyo qolalka si fiican u qalabeysan.
Barafka waa jiidashada weyn ee Brannenburg, taas oo aad awoodid si fudud u gaaraan tareen ka Berlin iyo magaalooyinka kale ee Germany iyo Europe.
Munich in ay Tareenadu Brannenburg
Berlin si Tareenadu Brannenburg
Hanover in Tareenadu Brannenburg
Hamburg si Tareenadu Brannenburg
Best jiga loo dhan yahay ee Europe Dhamaystiri
Haddii aad rabto inaad ku raaxaysatid fasaxa ee jiga ugu fiican oo Yurub ku siin karaan, qorsheeyo safarkaaga iyo jartaan tikidhka tareenka aad hore in ay ka faa'iidaystaan ​​ka mid ah heshiisyada ugu wanaagsan!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-all-inclusive-resorts-europe/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / ZH-CN si / de ama / ru iyo luuqado badan.
#All-InclusiveResorts #allinclusive #jiga #traveleurope europetravel talooyin tareenka tareen safarka safarka tareenka safarka